Maleeshiyada Oromada oo kala xidhay Jigjiga iyo Aw-bare. | ogaden24
Maleeshiyada Oromada oo kala xidhay Jigjiga iyo Aw-bare.
Boqolaal maleeshiya Oromo Hubaysan ah ayaa Gabi ahaan ba kala xidhay magaloyinka Jigjiga iyo Awbare waxaana Falkani uu cabsi iyo Argagax ku abuuray bulshada Somaaliyeed ee kudhaqan Aagaasi.
Masuul katirsan mamulka cusub ee madaxwayne Mustafe Cagjar ayaa Ogaden24 u xaqiijiyay in arinka Jid Gooyada maleeshiyada Oromadu uu Taagnaa 4-tii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana Hakad uu kuyimd isu socodkii magalooyinka Awbare iyo Jigjiga.
Maleeshiyada Oromada ayaa sidoo kale waxaa ay Gooyeen oo Gabi ahaan ba Wadadii kabaxda magalada Jigjiga ee sii marta magalada Ma’ayso kadibna Gasha magaalada Diridhaba, waxaana Falkani Qorshaysan ee maleeshiyada Oromada oo saamayn balaadhan kuyeeshay isu socodkii shacabka aan wali kahadlin mamulka cusub ee madaxwayne Mustafe.
Oromada ayaa Horay Somaalida uga Goysay Laamiga dheer ee xidhiidhiya Jigjiga Babili, Harar, Diridhaba iyo wixii kaxageeya, taasina waxay Somaalida ku Jirabtay inay isticmaalaan diyaarada oo ay Gabi ahaan ba kacaagaan Jidkaasi Laamiga ah.
Sida uu masuulku noo xaqiijiyay majiro wax khasaare dhimasha ah oo ilaa iyo Hada ay maleeshiyadaasi Gaysatay balse waxaa jira barkac balaadhan oo dadka Beeraleyda ahi ay kaga barakaceen dhulkoodi, waxaana Jigjiga soo Gaadhay dad badan oo kasoo barakacay deegaamada maleeshiyada Oromadu Fadhiisatay.